जापानको पेट्रोनामी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | Gastronomy, जापान
La जापानी पेट्रोनामी यो मेरो मनपर्ने मध्ये एक हो। धेरै थोरै चीजहरू मलाई मनपर्दैन र म उदाउँदो सूर्यको भूमिमा यात्रा गर्ने सबैलाई पूर्वाग्रहहरू छोडिदिन र सबै कुराको लागि प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। पक्कै सबै।
सत्य भनेको जापानी पेट्रोनोमी हो यो सुशी भन्दा धेरै हो, त्यसोभए यदि तपाईं यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ वा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र जापानी रेस्टुरेन्टहरूको कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी यहाँ सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा गर्नेछौं। जापानी खाना
1 जापान र यसको खाना
जापान र यसको खाना
युरोपेली खानाले हामीसँग मासुको प्रयोग गरीरहेको छ र थोरै र प्रशस्त खानाको साथ टेबल। जापानी खाना अलग छ: त्यहाँ थोरै मासु र धेरै व्यञ्जनहरू छन्। यो टेबुलमा बसेर मलाई लाग्यो कि मलाई भोक लागेको छ ... तर केहि टाढा हुन सक्दैन।
जापानी खाना योसँग धेरै मौसमी पकवानहरू छन्, क्षेत्रीय विशेषताहरु र धेरै रेस्टुरेन्टहरू जुन एकल डिशमा विशेषज्ञ छन्, जसको साथ तिनीहरू असाधारण तहमा पुगेका छन्। मूलतः जब हामी जापानमा खाने बारे कुरा गर्छौं हामी सुशी, टेम्पुरा, रमेन, सोबा, उडोन, याकितोरी, सशिमी, करी, टोन्काट्सु, ओकिनोमियाकी, चावल, टोफू र अचारको बारेमा कुरा गर्छौं। के नामहरू!
सुशीबाट सुरु गरौं। उही हो र जापान बाहिर सबैभन्दा लोकप्रिय पकवान तर देश भित्र, अझै एक देखा पर्दछ जुन विशेष अवसरहरूमा विशेष अवसरहरूमा देखा पर्दछ। प्लेट छ चावल जुन सुशी सिरकासँग तैयार छ र निश्चित प्रविधि अनुसरण गर्दै, र माछा। त्यहाँ धेरै प्रकारका छन् तर सबै भन्दा लोकप्रिय बीच निम्नहरू छन्:
नोरिमाकी: यो विशिष्ट रोल हो, धेरै प्रकारहरू, र यो पनि खरीद गरिएको छ कोम्बिनी (लसन, / / ​​११)
निगिरि: तिनीहरू आवरणमा माछा वा शेलफिसको साथ सबैभन्दा स्क्वैश चावलको बलहरू हुन्। त्यहाँ धेरै प्रकारका पनि छन्।
तेमाकी: यो लामो र ठूलो रोल हो जुन नोरी समुद्री किनारमा कभर गरिएको छ र चामल, तरकारी र माछाले भरिएको छ।
inari: यो एक सस्तो सुशी हो जहाँ चामल फ्राइड टोफुको झोला भित्र राखिन्छ।
यहाँ हामी कुरा गर्छौं फ्राइड तरकारीहरू, माछा र समुद्री खाना। यो पोर्तुगाली मूलको खाना हो जुन १th औं शताब्दीमा नागासाकीमा देशमा देखा पर्‍यो र समयको साथ यसले जापानको बाँकी ठाउँहरूमा पनि ठूलो लोकप्रियताका साथ फैलियो। यो प्राय: मुख्य पकवान हो र त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू मात्र टेम्पुरामा विशेषज्ञ छन्, तर कहिलेकाहिँ टेम्पुरा जस्तो मनपर्दछ टपिंग उदोन वा सोबाको।
त्यहाँ माछा, झींगा, औबर्जिन, मशरूम, कद्दू, मिठो आलुको टेम्पुरा छ र त्यहाँ बिभिन्नता पनि छ जुन तरकारीहरू र माछा र समुद्री खाना भनिन्छ काकीएज। टेंपुरा प्राय: प्रस्तुत गरिन्छ, जब यो व्यक्तिगत रूपहरूमा बनाइन्छ, थोरै नुनको साथ र सस वा वासाबी वा डाईकनको सानो कचौरा, सेतो शलगमको साथ।
छोरा गहुँ चाउचाउ, सोबा भन्दा गाढा, सेतो र धेरै स्वादिष्ट। तिनीहरूलाई तातो वा चिसो खान सकिन्छ र त्यहाँ अरू भन्दा बढि लोकप्रिय संयोजनहरू पनि छन्।
तातो गन्ध हो कामगे, सास र तरकारीहरू सँगसँगै जो कहिलेकाँही परिचित सर्विंगमा सेवा गरिन्छ, Kake ओसाकामा लोकप्रिय ब्रोथ र चाईभहरूसँग, करी (यो यति गहन छ कि तपाईं दाग नखोज्न होशियार हुनुपर्छ), चिकारा एक मोची (चामलको केक) र नाब्याकी जुन टेम्पुरा टोपिंगको साथ आउँदछ।
को प्रकारहरु बीच चिसो udon त्यहाँ छ zaru, एउटा विशेष बाँस प्लेटमा सेवा, तनुकी यो तातो र टेम्पुराको साथ पनि परोसिन सकिन्छ, किट्स्यून र टेम्पुरा उस्तै। सत्य यो हो कि तिनीहरू सबै धेरै स्वादिष्ट छन्, तपाईंसँग गन्ध छ र शोरबा सबै भन्दा राम्रो हुन्, यो कचौरा खाली छोड्नु असम्भव छ।
त्यहाँ धेरै छन् udon मा विशेषज्ञता रेस्टुरेन्ट र साथै धेरै तारहरू सस्तो मूल्य, 500 र 1000 येन बीच।
छोरा Buckwheat चाउचाउ, अधिक देहाती र टाँसिएको। प्रस्तुत गरिएको छ तातो वा चिसो र ती जापान भर मा धेरै लोकप्रिय छ। त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू पनि छन् जुन आफैंले तयारी गर्छ र तिनीहरूलाई किन्न सक्दैन, विशेष जनसाधारण प्राप्त गर्न र त्यो कारणका लागि, अन्य पसलहरू भन्दा बढी प्रख्यातको साथ।
सबैभन्दा आधारभूत सोबा हो म सोबाको मृत्यु भयो, सोबा चाउचाउहरूसँग जुन उमालेर र शीतल हुन्छ र सोया सॉसको साथ खाइन्छ। केही सोबा पकवानहरू वर्षको केही खास समयमा मात्र खाइन्छन्उदाहरणका लागि, न्यु इयर इभमा। सुपरमार्केटमा ती प्याकेजहरूमा खरिद गरिन्छ, सुक्खा, किनकि हामी यहाँ पास्ता किन्छौं, तर ती ताजा छन् भने तिनीहरू उत्तम हुन्छन्।
सोबाका अन्य प्रजातिहरू हुन् केक सोबा बोट बिरुवाबाट बनेको शोरबाको साथ, kitsune soba फ्राइड टोफुको साथ, तनुकी सोबा टेन्काट्सु र टेंपुरा वा नानबानसँग जुन कुखुरा वा बतखको ब्रोथ छ।
Udon रेस्टुरेन्टहरूमा पनि त्यहाँ सोबा रेस्टुरेन्टहरू छन्त्यहाँ स्थानहरू पनि छन् जुन दुबै मेनूमा प्रस्ताव गर्दछ। मूल्यहरू समान छन् र तपाइँ प्रजातिहरू धेरै छुट्याउन सक्नुहुन्न। तपाईंले भर्खरै यो जान्नुपर्दछ कि तपाईं त्यसलाई माया गर्नुहुनेछ।
चाउचाउ र शोरबासँग भाँडा भनेको चीनबाट आयात गरिन्छ। रामेन सस्तो र लोकप्रिय फूड पार उत्कृष्टता हो, जापानमा त्यहाँ कुनै कुना यस्तो छैन जहाँ तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्न। रमेन यो बेस सूप अनुसार वर्गीकृत गरिएको छ त्यसैले त्यहाँ रामेनका धेरै प्रकार छन्, केहि अरू भन्दा बढी लोकप्रिय।
उदाहरणका लागि, shio ramen यो हल्का, नुनिलो, कुखुराको ब्रोथ वा कहिलेकाँही सुँगुरहरूको साथ हुन्छ। को मिसो रामेन मिसो पेस्टको स्वाद हुन्छ र होक्काइडो, मा जन्मन्छ shoyu ramen यो सोया सॉस जस्तै स्वादको हुन्छ र माछा वा पोर्क ब्रोथ हुन सक्छ। र अन्तमा टन्कोट्सु जो ब्रोथको स्वाद लिन पोर्क हड्डीको साथ बनेको हुन्छ। यो बाक्लो र धेरै, धेरै स्वादिलो ​​छ।
चाउचाउहरू गहुँबाट बनेका छन् र त्यहाँ लामो र बाक्लो तर पातलो चाउचाउहरू छन्। रामेनमा तपाईं ग्रील्ड पोर्क, बाँस, स्प्रि onion प्याज, सिमी अंकुरित, उमालेको अण्डा, मरीनेट गरिएको वा कच्चा, समुद्री शैवाल, माछा केक माग्न सक्नुहुन्छ। kamaboko, बटरिएको मकै वा सुक्खा माखन। र यदि यो पर्याप्त थिएन भने, मेनूमा सामान्यतया व्यंजनहरू सँधै साथीहरू जस्तै समावेश हुन्छन् gyosas (स्वादिष्ट पकौडी), चामल ...
यदि तपाइँ मासु मन पराउनुहुन्छ र तपाइँ सूप र चाउचालको प्रशंसक हुनुहुन्न भने, याकिटरि तपाइँको लागि हो। सरल, सस्तो, स्वादिलो। यो बारेमा छ कुखुरा, मासु र tripe को skewers, जुन ग्रिलमा पकाइन्छ। मेनू विशेष रेस्टुरेन्टहरूमा बृहत हुन्छ र धेरै सस्तो त आइस चिसो बियरको साथ तपाईं धेरै पटक अर्डर गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ पनि छन् लोकप्रिय याकिटरिस जस्तै मोमो, कुखुराको फिला, नगिमा, the tsukune कुखुराको मीटलोफ़, तरकारीहरू र अण्डाहरूसँग टोरिकावा धेरै चिल्लो वा यो reba, कुखुरा कलेजो कहिलेकाँही तपाईले उनीहरूलाई नुनिलो वा मीठो बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ एक खुशी!
यदि माछा तपाईंको चीज हो र तपाईं यसलाई कच्चा खान डराउनुहुन्न भने साशिमी तपाईंको लागि हो। यो छ सुशीको रूपमा लोकप्रिय र यद्यपि माछा यो निस्सन्देह प्रमुख घटक हो गाईको मासु, घोडा वा हाइनिसको साथ सासिमि पनि छ।
त्यहाँ धेरै सशिमी रेस्टुरेन्ट र धेरै भेरियन्टहरू छन्। तिनीहरूले धेरै ट्रेका साथ तपाइँको ट्रे सेवा गर्दछन् कच्चा माछा, नरम स्लाइसमा काट्नुहोस् र सँधै तरकारी वा डाईकन र धेरै बरफको साथ प्रस्तुत गरिन्छ ताजा राख्नका लागि। यो सामान्यतया सोया सॉसको साथ खाईन्छ, तपाईं टुक्रा र मुख भिजाउनुहुन्छ, वा वासाबी वा ग्रेटेड अदुवाको साथ।
भेरियन्ट्स? साशिमी साके, मागुरोटाइसाबा, katsuo। Katsuo जापान मा एक लोकप्रिय माछा हो। अन्य sashimi माछा होइन तर हो समुद्री खाना जस्तै अक्टोपस, स्क्विड, झींगा, क्लैम्स र क्याभियार।
मेरो मन पर्ने! यो एउटा थाल बनाइन्छ तातो कोबी र मासा को साथ ग्रील्ड यसको शीर्षमा बिभिन्न सामग्रीहरू छन्। तपाईंसँग केमा निर्भर हुन्छ, Okonomiyaki फरक तरिकाले भनिन्छ र ज्यादै ठूलो हो ओसाका र हिरोशिमामा लोकप्रिय, जबकि टोक्यो मा तपाईं यसलाई पनि खान सक्नुहुन्छ।
यस थालको खास ठ्याक्कै गाढा सासको वर्सेर्शायर सससँग मिल्दोजुल्दो स्वाद छ, तर त्यहाँ मेयोनेज र ग्रेटेड बोनिटोका लाइनहरू पनि छन् जुन तातोमा खानाले छोडिदिन्छ भने यो जीवित छ जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईं आफैंले यसलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ तर सामान्य रूपमा तपाईंले कुकलाई तपाईंको अगाडि यसो गरेको देख्नुहुन्छ।
के तपाई करीलाई तपाईको भान्छाको भाँडोमा रहेको मसलाको रूपमा सोच्नुहुन्छ? जापानमा यहाँ हेर्नको लागि केहि छैन। यो एकदमै डिश हो र यो यत्तिको गन्धको छ कि खाजा खाने बेलामा तपाईं कहिलेकाँही सडकमा हिंड्नुहुन्छ र यसले तपाईंलाई व्याकुल बनाउँछ।
करी रेस्टुरेन्टहरू छन् यद्यपि तपाइँ सुपरमार्केटमा करी पनि किन्न सक्नुहुन्छ। थाल यो आलु र प्याजको साथ केही चामल र मासु हो। चटनीमा करी छ र यो धेरै बाक्लो र गाढा छ र मिठो छ, भारतीय को करी जस्तो मसलादार छैन। मासु पोर्क वा गाईको बीचमा छान्न सकिन्छ र थाल सामान्यतया केही अचारको साथ हुन्छ।
अन्तमा, यस डिशसँग यसको फ्यानहरू छन्। बारेमा ब्रेडड र फ्राइड पोर्कको बाक्लो स्लाइसहरू। तिनीहरूले सामान्य रूपमा तपाईंको सेवा गर्छन् एक सेट को भाग, एक मेनूबाट, जहाँ मिसो सूप, अचार र बन्देज पनि छ। यहाँ तोरी वा टन्काट्सु सॉस, प्रकार वर्सेस्टरशास सस छ।
यसलाई क्याट्सुडनमा पनि दिइन्छ, जुन अझ प्रभावकारी छ किनकि यो चामलको भाँडो हो, अण्डा र चाइभ्सको मिश्रणको साथ। यदि तपाईं भोकाउनुभएको छ भने, यो तपाईंको प्लेट हो। र अन्तमा हेर्नु सामान्य छ स्यान्डविच, katso Sando, सुविधा स्टोर र रेलहरूमा।
जस्तो कि तपाईंले देख्नुहुन्छ, जापानी खाना सधैं केहि एक सानो प्रदान गर्दछ चिसो, सधैं राम्रो गरीएको। तपाईले अरू केहि भन्दा राम्रो पकाएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तर सब भन्दा लोकप्रिय र सस्ता चेनले पनि तपाईलाई निराश पार्दैन। तपाईंको छुट्टीलाई ग्यास्ट्रोनोमिक बिदामा पनि बदल्नुहोस्। जापानमा तपाईले यसमा पछुताउनु पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Gastronomy » जापानको ग्यास्ट्रोनमी
Merzouga मा के हेर्ने